China Aurora Cannabis inoisa 1.7 mamirioni emamirimita emakumbo embehemeti munzvimbo yekutengesa fekitori nevatengesi | Aixiang
Aurora Cannabis inoisa 1,7 mamirioni emamirimita emakumbo ehemhem munzvimbo yekutengesa
Aurora Cannabis inoronga kuburitsa imwe yemapurazi makuru uye anodhura anoshandiswa kurima cannabis munhoroondo, asi chero mutengi anogona kuve akabatikana kuti awane mari yakawanda kuitira kuti chirongwa ichi chibudirire.
Sekureva kwezvinhu zvekushambadzira zviripo pachena, Aurora yakaisa mari mazana maviri nemakumi maviri nemakumi masere emadhora eCanada (205 mamirioni emadhora ekuAmerica) "ese-akabatanidzwa" munzvimbo inokwana 1.7 miriyoni tsoka tsoka muMedicine Hat, Alberta, uko kambani ichava nemusoro weColliers International, iri muToronto, inorongedzwa seyemupi wezano wezvemari uye iyo inomiririra mumiriri kune zvishoma zvakapedziswa real estate.
Nekudaro, kana mutengi akapedzisa kushandiswa kwekutanga kwegreenhouse ("senge mamiriro-e-e-e-e-iyo-ekurapa-giredhi girinihausi nzvimbo"), zvinogona kuda mamirioni emadhora mune imwezve mari, uye kana ikapedzwa kune isiri-cannabis shandisa, zvingangoda mari shoma.
Rondedzero iyi ndiyo ichangoburwa muenzaniso wekuburitsa kukuru kwemugadziri mukuru weCanada kubva kumahombekombe makuru e cannabis mugore rapfuura, uye mugadziri akapfuura zvakanyanya nzvimbo yekurima pakati pe2017 na2019.
Sekureva kweshumo we "Cannabis Bhizinesi Zuva Nezuva", mazhinji emaprojekti e greenhouse, angave akavakwa kuburikidza nekubatanidzwa nekutenga kana kupedzwa kuburikidza nekubatanidzwa nekutenga, zvakazopedzisira zvaita kuti vagadziri veCanada vane marezinesi vatambure zvakananga huwandu hwemamirioni emadhora mukurasikirwa kwezvivakwa uye kuwedzerwa mabhirioni. yemadhora. Iyo yekunyora nyora-pasi.
Kero iri mubhurocha reAlberta Greenhouse inoenderana nekero inoshandiswa nehurongwa hweAurora Sun.
MJBizDaily yakaziva kuti Aurora yakagumisa kushandiswa kweAurora Sun greenhouse gore rapfuura, uye iri kuunza chivakwa kumusika pasina "mutengo wekuwana" dambudziko rekubvunza mitengo. Izvi zvinobatsira kuona mitengo yemidzi mumisika isina kugadzikana.
Zvinoenderana nebhurocha iri, "chinangwa chekupedzisa" chakanyorwa senge kupera kwekota yechipiri kusvika pakutanga kwekota yechitatu yegore rino.
Kufamba uku kunouya gore rimwe chete mushure mekunge Aurora yabvuma kupihwa imba huru yekudyara muExeter, Ontario, uye bhidi iri rinenge hafu yemutengo waro weC $ 17 mamirioni uye chetatu chemutengo wekutanga wekutenga.
Mutsamba yeemail kuna MJBizDaily, mutauriri akataura kuti Aurora "inoramba ichiongorora network inoshanda yekambani iyi kuona kuti yakakodzera bhizinesi redu uye renguva pfupi."
Chirevo ichi chakaenderera mberi: "Mukupindura shanduko dzichangoburwa muindasitiri uye nezvedu zvinodiwa, kambani yakazivisa kuti ichamisa mabasa nekusingaperi kuAurora Sun muMedicine Hat, Alberta."
"Tiri kushingairira kusimudzira mashandisirwo enzvimbo iyi. Hapasisina ruzivo rwakadzama panguva ino nekuti maitiro acho achiri mudanho rekutanga."
Sekutengesa chivakwa chikuru chemamirioni mazana mana emamirioni uye chivakwa chebetsero che285,000.
Zvinoenderana nebhurocha iri, mutengesi (Aurora mune ino kesi) "akavhurika kune akasiyana masisitimu ezvigadziriso nemaitiro ekufunga kuti awedzere kukosha."
"Izvi zvinosanganisira, asi hazvingogumiri, kutengeswa kwakananga kweimwe kana mbiri zvivakwa nemari kana dzimwe nzira dzekufunga; kutengeswa kwechikamu chemari kune mumwe wako;
Kunyangwe hazvo paine mari yakawanda yakaiswa mari, Medicine Hat's greenhouse haisati yapera.
"Mari yekuwedzera inodiwa kuti chivakwa chiitwe, asi mutengo unozotariswa nemashandisirwo anoitwa nemutengi," maneja maneja weColliers International, Matt Rachiele akaudza MJBizDaily kuburikidza neemail.
"Isu takagamuchira kurairirwa kwekutanga kubva kumainjiniya. Parizvino, mutengo wekupedzisa zvivakwa zvese zvekushandisa zvisiri zvembanje zvinogona kunge zviri pasi pegumi muzana zvemari, asi kuti ipfuure chinangwa chayo chekutanga, inofanira kushandisa yakawanda yemari.
Rachiele akataura kuti matanhatu emabheyi makumi matatu nematanhatu echivakwa chikuru apera uye mamwe matanhatu apera zvishoma.
Gwaro rekusimudzira rakati: "Kunyange hazvo pakutanga zvaida kuzadzikiswa senzvimbo yepamusoro yezvirimwa yegreenhouse, chivakwa nemidziyo inoenderana nayo zvinogona kushandiswa nyore nyore pane zvingangoshandiswa."
Matt Lamers ndiye wepasi rose mupepeti weCannabis Bhizinesi Mazuva ese, iri padyo neToronto. Unogona kutaura naye kuburikidza ne [Email Dziviriro].
Ndinovimba mumwe munhu achaongorora kuti nei saizi yemusika weCannabis cannabis yakasimudzwa zvakanyanya. Kukura zvisiri pamutemo (zvisina marezinesi) kukura kana kuwedzerwa mutero kunogona kutsanangura mamwe matambudziko?
Ndingafarire kuona Canada ichiburitsa cannabis kuIllinois. Zvirwere zvine makaro ikoko zvinochaja zvakawanda uye purofiti kubva kune vatengi vazvo. Ivo havana hunhu kana bhizinesi maitiro. Zvisikwa zvakaita seizvi zvinofanirwa kusungwa.
Cannabis Bhizinesi Mazuva ese-sosi inovimbwa kwazvo yenhau dzezuva nezuva, yakanyorwa chete nevanyori venhau muindasitiri. Dzidza ZVIMWE
Post nguva: Mar-25-2021